Chii uye chakakosha sei ecomobility | Green Renewables
Iko kusvibiswa kuri kuwedzera mumaguta makuru uye zvakakomba shanduko yemamiriro ekunze uye kudziya kwepasirese, zvinomanikidza maguta kuita kuti kutakura kwavo kusanyanya kukuvadza nharaunda. Mazhinji emanyuko ekusvibisa gasi inobuda mumaguta anobva mukutakura. Nemamiriyoni emotokari anotenderera nguva dzese, mhedzisiro inoshungurudzwa nevagari uye nharaunda zvakakomba.
Kuderedza aya matambudziko, ecomobility inomuka. Izvo ndezve kumwe kugadzikana kwekufamba kwakabatanidzwa mumaguta kudzikisira kukanganisa kwekufambisa pane zvakatipoteredza. Iwe unoda kuziva here kuti ecomobility ine chii uye ndeapi maficha ayo aayo?
1 Chii chinonzi ecomobility?
2 Kukosha kwekusagadzikana
3 Mhinduro dzinokurudzira kufamba kwakasimba
4 Sertrans uye ecomobility
Chii chinonzi ecomobility?
Sezvambotaurwa, kusagadzikana kunobva mukukosha kwekuisa pfungwa yeecology mukutakura. Kufamba kweguta kunoenderana nerudzi rwemafuta anoshandiswa, maratidziro emigwagwa, kuwanikwa kwenzira dzemabhasikoro, kugona kwekufambisa kwevanhu, nezvimwe. Naizvozvo, zvinodikanwa kuisa matanho ekuderedza kusvibiswa.
Ecomobility inosanganisa iwo midhiya masystem anotungamira vanhu nezvinhu kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe, kuchengetedza nekudzivirira zvakasikwa uye nharaunda. Uku kufamba kune hutano inotibatsira kuenderera mberi mune ramangwana riri kure kwazvo kuderedza kusvibiswa kuenderera. Pfungwa yekusimudzira kwakasimba inopindawo ecomobility. Izvo zvinodikanwa kuti mukutakura tinokwanisa kusangana nezvazvino zvinodiwa pasina kukanganisa zvizvarwa zvenguva yemberi kusangana nezvazvo.
Ecomobility inozivikanwawo sekusimudzira kufamba. Ingangove isiri iyo yekutanga nguva iwe yaunonzwa nezvayo. Zvisinei, inowanzovhiringidzika nemabasa akadai se kufamba, kushandisa bhazi revanhu kana bhasikoro. Ichokwadi kuti zviito zvitatu izvi zvinobatsira kudzora kusvibiswa uye kufamba kwakasimba. Asi kusagadzikana hakusi kweizvi chete. Iko kusanganisa kweasina kusvibisa nzira dzekutakura uye nzira yemigwagwa iyo inofambisa nzira.
Izvo zvakakosha kuti kufambisa kweguta kugadzikane kana tichida kudzivirira kufa nguva isati yakwana kubva mukusvibiswa. Kusvibiswa kwemweya kunonzi inzvimbo yakanyarara ine basa rekuuraya vanhu. Chii chimwe, inowedzera zviitiko zveasima, allergies uye mamwe matambudziko ekufema uye emwoyo. Neichi chikonzero, kutakura kwedu kunofanirwa kuve kwakanyanya kugarisana.
Mazuva ese kukanganisika kuri kuwedzera huremu munzanga. Zvakajairika kuona kuti vanhu vanovatumidza sei uye chikamu chemazwi akajairwa. Tsoka yezvakasikwa yakasiyiwa nekutakura kwedu inowedzera gore rega rega. Padanho remunhu hazvireve chinhu, asi takawandisa pasi rose.
Iko kushandiswa kwemotokari nedzimwe mota dzinoda kusvibisa mafuta kunowanzoitika. Imwe neimwe mota inoburitsa matani eCO2 mumhepo pazuva. Uye zvakare, isu tinofanirwa kufunga nezve kutakurwa kwezvinhu. Kunyangwe ichi yakabatana nehupfumi uye kukura (nekugadzira mabasa), inzvimbo inosvibisa. Zviri mumatavi aya ekufambisa uko kunofanirwa kuita zviito zvinobatsira ecomobility.
Kukosha kwe ecomobility kuri mukuda kwekuvandudza mhando yemweya uye hutano mumaguta. Almost 40% yekusvibisa gasi inobuda mumaguta kunobva mukutakura kwekutengesa.
Kusiyana nezvinofungidzirwa, kushandiswa kwemotokari dzinosvibisa kwete chete zvinokanganisa nharaunda kana hutano, asi zvakare nehupfumi pamwe nevemagariro. Izvi zvinokonzerwa nekuwedzera kwehuwandu hwetsaona, kusaenzana uye kurasikirwa kwemakwikwi nekuda kwekuwandisa kwemotokari dziri kutenderera.
Mhinduro dzinokurudzira kufamba kwakasimba
Kufamba kwakasimba hakungori kwekuchovha bhasikoro, kukwira bhazi kana kufamba. Izvo ndezve kurumbidza mhinduro dzakasiyana kuti dziwedzere kugadzikana Saka kuti iwe uone muenzaniso, pakongiresi zvakataurwa kuti mune 3,5 mita yakafara nzira 2.000 vanhu vanogona kupfuura nemota mu1 awa. Kana vari mabhasikoro, gumi nemana; vanofamba netsoka, 14.000 19.000; nechitima chakareruka, 22.000 uye mumabhazi, 43.000. Uye mazhinji akawanda nemetro, inosvibisa zvishoma pane bhazi.
Iyo haisi nyaya yekusarudza chakaringana chekufambisa, asi chekuyera huwandu hwevanhu vanogona kufamba mumugwagwa mumwe chete. Kana tikasarudza mota inokwanisa kugara vanhu vazhinji, tinenge tichideredza kusvibiswa zvakanyanya.
Zvimwe zvezviito zvinoitwa nekusagadzikana ndeizvi:
Shandisa ruzhinji mabhasikoro masisitimu mumaguta mazhinji.
Koshesa kutakurwa neruzhinji pane zvakavanzika.
Wedzera nzvimbo dzevanofamba netsoka.
Chengetedza kupinda kwemotokari kune dzimwe nzvimbo dzeguta.
Paya pekushandisa mota, zviite neinonyanyisa kutora nzvimbo inogoneka.
Chimwe chinhu chekufunga nezvacho mukufamba kwakasimba marongero emigwagwa. Njanji dzinofanirwa kunge dziri munzvimbo yekuti madaro ekufamba uye kuwanda kwemotokari zvishoma. Zvinotaridza kuti jamhu yemumigwagwa inosvibisa kupfuura traffic yemumugwagwa.
Kune rimwe divi, kuunzwa kwemotokari dzine mafuta asinga svibise uye ne zero zoni kunoonekwa sekukosha kwepedyo. Tiri kutaura nezve mota dzemagetsi. Kana kugadzirwa kwemagetsi kuchibva kune fossil peturu, inosvibisa mukugadzirwa kwayo, asi kwete mukushandisa kwayo. Nekudaro, kana iyo sosi yesimba ichibva kune inogadziriswazve, mota ichave ne zero choutsi.
Sertrans uye ecomobility
Sezvambotaurwa, kufambiswa nenhamba dzekutakura ye40% yeiyo inosvibisa mhedzisiro yeguta. Ichi ndicho chikonzero Sertrans anga achiisa mari mukutakura kwekutakura kwekutakura kwemakore. Munguva yemakore aya yanga ichiita zviito zvinoderedza kukanganiswa kwezvakatipoteredza nemabasa ayo.
Imwe yadzo kuronga kwakaringana kwenzira. Kuderedza nguva yekufambisa, Sertrans anoronga nzira ipfupi iri kutaurwa kwete mumakiromita chete, asi mune CO2 choutsi. Vatyairi vari kushandisa matekinoroji matsva uye vachishandisa kururamisa kunopihwa nevamwe vatyairi. Nenzira iyi, madaro ekufambisa anoderedzwa.
Chimwe chiito ndeche optimization yemitoro. Marori ekufambisa akakura uye anogona kubata zvimwe zvinhu kamwechete. Naizvozvi, huwandu hwenzendo hunogona kudzikiswa uye padyo nezvinangwa zvekusimudzira.
Pakupedzisira, Sertrans kutakura kwepakati nepakati kwawedzera. Iko kusanganiswa kwekufambisa kwepasi nedzimwe mhando dzekutakura kusvibisa zvishoma.
Sezvauri kuona, ecomobility yakakosha kwazvo nhasi uye haina kungoenderana nekushandiswa kwekufambisa kwevanhu uye mabhasikoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Chii chinonzi ecomobility uye chakakosha zvakadii?